यस्तो छ बेलायतका राजनीतिक दलहरुको आर्थिक स्रोत र पारदर्शिता बेलायतका राजनीतिक दललाई सरकारले नै पैसा दिने व्यवस्था छ। चन्दा पनि लिन पाउँछन्। तर, आम्दानी र खर्च पारदर्शी बनाइएको छ। सांसदहरुलाई कानूनले यसरी बाँधेको छ कि गलत कागजपत्र पेस गरेर घरभाडा लिनेको राजनीति नै सकिएको उदाहरण पनि छन्।
राजा महेन्द्रको जवाफ-कम्युनिष्ट विचारधारा मोटर चढेर आउँदैन ! २०१८ सालमा चीनको पहिलो भ्रमण गरेका राजा महेन्द्रले सीमा सम्झौता र अरनिको राजमार्ग निर्माण लगायतको सम्झौता गर्दा कतिपयले अचम्म मानेछन्।
यस्तो थियो पृथ्वीनारायणको ‘अंग्रेज नीति’ हाम्रो मातृभूमि नेपालको पूर्व इतिहासमा चाख राख्नेहरूका मनमा सधैं खेलिरहने एउटा कुरा के छ भने, पृथ्वीनारायण शाह भन्दा पहिले नेपाल कस्तो थियो ?
आलुको कथा र हर्क गुरुङले बुझेको ताप्लेजुङ बेलायतका वनस्पति विज्ञ जोसेफ डाल्टन हुकरमार्फत् नेपालमा सबैभन्दा पहिले ताप्लेजुङमा आलु भित्रिएको रहेछ।